Si xor ah u samee HTC nidaameed la Outlook, Google, Yahoo, Account HTC, Exchange ActiveSync, iyo More
Si xor ah u isticmaal HTC nidaameed la Outlook, Google, Yahoo, Account HTC, Exchange Active-u hagaagsan, iyo IWM
La aasaasay sannadkii 1997, High-Tech Computer (HTC) Corporation waa kii Taiwan ee casriga ah iyo kiniiniyada la xarunta ee New Taipei City, Taiwan. HTC sida soo saaraha design asalka iyo qalabka soo saaraha asalka bilaabay, qorshaynta iyo qalabka wax soo saarka sida telefoonada gacanta, telefoonada screen taabto, iyo PDAs ku salaysan Windows Mobile OS. Ka dib markii ay markii hore samaynta casriga ah ku salaysan inta badan Windows Mobile, HTC balaariyay ay diiradda 2009 qalabka ku saleysan Android ah.
Haddaba HTC oo dhan ee aad u baahan online aasaasiga ah sida xiriirada, jadwalka taariikhda, iyo macluumaad kale oo ka shabakadaha bulshada, xisaab email, iyo adeegyada kale ee la online synced karo si sahal ah. Iyadoo ku saleysan nooca xisaabta, saxiixay in ay u xisaab-online aad kuu ogolaanayaa inaad u hagaagsan xogta u dhexeeya HTC iyo internetka.
2.1 darista Account ah
Tag Settings, iyo tap Accounts & nidaameed.
Tubada nooca xisaabta aad rabto in aad ku dar.
Raac tilmaamaha onscreen in ay galaan macluumaad aad xisaabta.
2.2 syncing Account ah
Tag Settings, ka dibna tubbada Accounts & nidaameed. Waxaad sameyn kartaa:
Tubada / Off Auto nidaameed On the biiro noqon hagaagsan automatic ah oo dhan xisaab aad On ama Off.
Gacanta u hagaagsan xisaab u gaar ah. Tubada nooca xisaab (sida u Exchange ActiveSync), ka dibna akoonka aad rabto in aad u hagaagsan ka jaftaa. On the screen goobaha Account, tuubada nidaameed hadda.
Qaar badan oo Chine xisbiga 3aad ayaa diyaar u ah adeegyada ay bixiso ee syncing xisaabaadka si HTC.
2.3 Helitaanka Synch
Hagaagsan Available la
1 HTC Exchange Active-nidaameed
2 HTC Muuqaalka
4 HTC Account HTC
3. syncing HTC la Accounts
3.1 syncing HTC la Exchange Active-u hagaagsan
Mid ka mid ah arrinta la users HTC waa xiriirada Exchange iyo jadwalka ma syncing. Laakiin waxaa muhiim ah in la ogaado HTC in la synced karaa Server Microsoft® Exchange 2003 Service Pack (SP2) ama ka dib. Waxa kaloo ay bixiyaan ilaa 15 xisaab Exchange ActiveSync on HTC.
Laga soo bilaabo screen Home ku, tap Mail.
Mid ka mid ah fursadaha soo socda waxaa la tarin kartaa:
Si loo dar xisaabta email ah ee Mail ayaa markii ugu horeysay, ka jaftaa Microsoft Exchange ActiveSync ku saabsan 'Dooro bixiyaha screen mail ah'.
Haddii aad mar hore ku daray account email ah ee Mail, saxaafadeed, ka dibna tubbada account Cusub. Haddii 'Dooro shaashada mail bixiye' waxaa soo bandhigay, ka jaftaa Microsoft Exchange ActiveSync.
Ku qor faahfaahinta akoonka Exchange ActiveSync, ka dibna tubbada 'Next'.
Dooro fursadaha u hagaagsan in aad rabto, ka dibna tubbada 'Next'.
Ku qor magaca akoonka, ka dibna tubbada 'Finish' Mudanayaasha.
User ayaa loo baahan yahay si ay u galaan goobaha Exchange Server gacanta, haddii Server Exchange shirkadaha ma taageeri auto-ogaado. Maamulaha Server Exchange waxaa lagala xiriiri karaa wixii faahfaahin ah.
Fadlan hoos ka eeg darbo screen hanaanka syncing:
3.2 syncing HTC la Yahoo
Iyadoo Yahoo, waa ay fududahay in hagaagsan marka aad la xiriirayso HTC casriga ah. Halkan sida.
Ku rakib oo fur app Yahoo Mail.
On tab Mail , ka jaftaa icon Menu ah
Tubada Settings Mail.
Tubada xisaabtaada Yahoo Mail.
Tubada nidaameed Yahoo Xiriirada.
Your Yahoo Xiriirada waxaa lagu dari doonaa qalab ee Xiriirada app. Haddii aad rabto in aad wax ka bedel Yahoo Xiriirada ka qalab aad, waa in Yahoo Xiriirada goobta mobile la booqday. Qaar badan oo Softwares xisbiga saddexaad ayaa sidoo kale u auto synch ee jadwalka Yahoo iyo xiriirada laga heli karo suuqa. Smoothsync u Yahoo kharash kaliya wax ka yar 3 $. Marka lagu rakibay, jadwalka Yahoo la hagaagsan karaa kalandarka HTC hooyo.
3.3 syncing HTC la Muuqaalka iyo dhib
Hagaagsan HTC shaqada ama Aayad keliya haddii aragti necayb dhigay hoose e-mail macmiilka. Inta lagu guda jiro Mudanayaasha ee xisaabta, waxaa si firfircoon weydiiyo oo ku saabsan nuxurka u hagaagsan oo wakhti u syncing. Si loo hubiyo in u hagaagsan yahay oo u shaqeeya labada xiriirada iyo kalandar sameeyo waxa soo socda:
Tubada Xisaabaadka iyo nidaameed
Tubada on account Exchange ah
In ka Data .Wadashaqayntaas iyo goobaha, hubi in wax walba oo la hubiyey
Haddii labaduba waa 'Calan', iyo xiriirada ama jadwalka aanay syncing, ka dibna 'unset' iyo ka jaftaa 'nidaameed Hadda'. Dabadeed 'Calan' iyo ka jaftaa 'nidaameed Hadda'.
3.4 syncing HTC la Google
In ka badan hal Google Account lagu dari karaa in qalabka HTC. Si kastaba ha ahaatee, ku xiga Google Accounts u hagaagsan kartaa oo keliya xiriirada, emails, iyo dhacdooyinka taariikheed. Adeegyada kale ee Google isticmaali Account ugu horeysay Google waxaad ku daray. Laga soo bilaabo shaashadda Home, MENU jaraa'id, ka dibna tubbada Settings> Accounts & hagaagsan.
Tuubada dar account Google.
Raac tilmaamaha onscreen inay la soo wareegto si ay xisaab ama sameysato akoon cusub.
Ka dib waa shaashada u syncing Google la HTC:
Haddii aad ilowday sirta Account Google, waxaad isku dayi kartaa in ay soo kabsadaan on HTC, ku qor email ama magaca isticmaalaha ee Google Account oo guji Gudbi. Raac tilmaamaha shaashadda si ay dib sirta.
3.5 syncing HTC leh u dhexeeya HTC ACC iyo dhib
By saxiixin aad Account HTC, users isticmaali kartaa adeegyada HTC in waxa laga heli karaa HTC. Marka aad ku abuuri karto Account HTC, users waxaa looga baahan yahay oo kaliya in ay bixiso cinwaanka email iyo password. Waxad abuuri kartaa Account ah HTC waxaa laga telefoonka HTC ama HTC u bilaabaa goobta. Wixii phone HTC, u tag Settings Accounts & hagaagsan in lagu daro iyo in la abuuro aad Account HTC.
Password waa la bedeli karaa. Isticmaalayaasha ayaa looga baahan yahay inay la soo wareegto in marka hore in ay Account ay HTC. Markaas riix arrow hoos-hoos ee geeska kore ee midig, guji goobaha Account, ka dibna riix Edit in aad bedesho password. Ka dib markii la beddelo iyo rumayn sirta cusub, guji Save. A software xisbiga saddexaad, Manager HTC nidaameed, ka dhigaysa in ay u guuraan dadka isticmaala ay xiriir iPhone, Calendar, SMS, sawiro, videos, wallpaper iyo Bookmarks in aad telefoon cusub HTC.
3.6 syncing HTC la Thunderbird
Waxaa u baahan tahay saacadduu in beddelid kasta ku qalab kasta waxaa si toos ah loo wareejiyay qalab kale oo ay howlan xiriirada iyo dhacdooyinka. Waxaa hadda fududahay in aad macluumaad ilaa taariikhda si toos ah in aad HTC casriga la Thunderbird.
BirdieSync waa software xisbiga 3aad isticmaalo nidaamka xogta u dhexeeya Thunderbird iyo HTC. Waxa ay taageertaa u hagaagsan ee photos xiriir, buugaag cinwaanka badan oo jadwalka taariikhda, kooxo xiriir, noocyada Calendar Google. Xogta ayaa sidoo kale lagu qabtay oo lagu gaadhsiiyo si gaar ah; Warbixin-shaqsiyeedka waxaa lagu keydiyo heer software. Waxaa si toos ah u dhexeeya beehsa qalab iyo computer desktop aad iyada oo la xidhiidha ammaan ah. App Tani waxay bixisaa kala iibsiga si toos ah Thunderbird Cinwaanka Book iyo macluumaadka Xiriirada Android via xiriir network TCP / IP ah. Screenshot u BirdieSync lagu muujiyay hoos ku qoran:
> Resource > Android > si xor ah u isticmaal HTC nidaameed la Outlook, Google, Yahoo, HTC Account, Act Exchange